KULANKII MAANTA : Gudoomiyaha Dhalinyarada G/Karkaar Eng Barma Ali Arab iyo Sii hayaha gudoomiyiha gobolka karkaar Ahmed Maxamud afbacle iyo ku xigeenkiisa iyo gudoonka haweenka gobolka . – RadioQandala.com
KULANKII MAANTA : Gudoomiyaha Dhalinyarada G/Karkaar Eng Barma Ali Arab iyo Sii hayaha gudoomiyiha gobolka karkaar Ahmed Maxamud afbacle iyo ku xigeenkiisa iyo gudoonka haweenka gobolka .
Posted on 9 August, 2017 by RadioQandala
Waxaa maanta magalada Qardho kulan ku yeeshay Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka karkaar Eng Barma Ali Arab iyo Sii hayaha gudoomiyiha gobolka karkaar Ahmed Maxamud afbacle iyo ku xigeenkiisa iyo gudoonka haweenka gobolka .
Waxaana lagu lafa gurayay in ay tala bixin ka siiyaa. Madaxwaynaha Dr abdiweli Mohamed ali gaas cidii loo soo magcaabi lahaa gudoomiyaha gobolka karkaar Kulanka oo ka dhacay xarunta gobolka karkaar Ayaa intii uu socday waxay ku lafa gureen cidii ay ka gobol ahaan doonayaan in uu qabto guddonka gobolka Mohamed muse oo ah isuduwaha wasarada arimaha gudaha gobolka karkaar wuxuuna muddo 12 sano ka shaqaynayay gobolka karkaar shirku inta uu socday .
Waxaa khadka telefonka kaga qayb galay wasiirka maaliyada puntland oo ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka karkaar intaan looagcaabin wasiirka maaliya puntland .
« Dhegayso: Liiska gollaha wasiirada dowladda Puntland oo lagu dhawaaqay
Gudoomiya Uruurka dhalinyarada Karkaar Eng.Barma oo TV Puntland waraysi siiyay »